HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNke a bụ ọnụahịa niile na-abawanye! .. Newgwọ Ọrụ Ọgba Ọhụrụ, Akwa na YHgwọ Ihe nkiri YHT
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
ọnụahịa niile na-abawanye
Nke a bụ ọnụahịa niile na-abawanye! .. Newgwọ Ọrụ Ọgba Ọhụrụ, Akwa na YHgwọ Ihe nkiri YHT. Eletriki, njem gas enweghị ike ịnwụ na ujo nke ụmụ amaala; akwa okporo ụzọ na akwa mmiri, NYT na tiketi ụgbọ njem, ụgwọ nzipu ozi nọ na-ama jijiji ka ọnụahịa ọnụ ahịa ha.
Mmụba nke 20 n'okporo ụzọ, ụgbọ oloko na ụgwọ maka akwụkwọ ozi ga-ekepụta oghere ọhụrụ na mmefu nke nwa amaala. Thetụ ego ahụ, obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ ụgbọ ala ga-eme mgbanwe ọhụụ na ọnụahịa ha.
Gaa n'okporo ụzọ
Carga ụgbọ ala iji bata na Istanbul esiri gị ike karịa. Onye na-anya ụgbọ ala site na Izmit West gaa Istanbul ga-akwụ 6 TL maka ọpụpụ Çamlıca na 10,5 TL maka ịgafe akwa. Mgbe ọnụahịa mmanụ gbanwere kwa ụbọchị, o doro anya na ike ga-agwụ njem ndị ahụ.
ANKARA NA IZMIR DINTA
Onye na-akwọ ụgbọ ala na-abanye n'okporo ụzọ awara awara si East gaa Izmit ma na-aga Ankara ga-akwụ 25,75 TL na nkwalite ọhụụ na ọpụpụ Akıncı. N'aka nke ọzọ, ịga Izmir dị ọnụ karịa n'ihi na okporo ụzọ bụ nke ụlọ ọrụ nke onwe ya. Altinova-Bursa North n'etiti 33,50 TL, Bursa West-Izmir dị n'etiti ụgwọ 119,75 TL. Ọnụ ego maka İzmir karịrị 150 TL.
TCDD'nin tiketi tarifụ ga-adị irè site ụnyaahụ, pasent 20 na-akwụ ụgwọ. Njem YHT n'etiti Izmit na Ankara mụbara site na 66 TL ruo 79,50 TL. Ndị ga-aga Eskişehir ga-akwụ ụgwọ 43,50 TL kama nke 52,50 TL. 19,50 TL gaa Istanbul Pendik ma ọ bụ Söğütlüçeşme na YHT, Halkalı26,50 TL ịga.
E gosipụtara n'ụdị ụgbọ oloko ahụ na nke ime obodo na obere obodo. Nkwado ahịrị Izmit-Istanbul commuter Line mụbara site na 11 TL ruo 11.50 TL na ego akara Izmit-Adapazari mụbara site na 10 TL ruo 12 TL. Ibelata pasent 65 maka tiketi ụgbọ elu maka ụmụ amaala karịa afọ 50, mbelata pasent 26 maka ndị na-eto eto na-erubeghị afọ 15 na-aga n'ihu.
UZỌ EGO dị iche iche (ụgbọala)
Izmit East n'ọnụ ụzọ
Rancezọ mbata na Altinova
16,85 TL site na Glad North ruo Kurnaköy
EMI AKPATARA EGO EGO
Izmit (Kurucesme) - Xlọ 40 TL
Izmit (Nkwụsị) - Ankara 75 TL
Ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko na ụgbọ oloko ga-ebuli? 16 / 04 / 2019 Ministri nke njem na ihe gbasara ihe ndi ozo mere nzuko na "onu ogugu ego na ego ha na ndi mmadu, tinyere nlekota oru nke okporo ụzọ, PTT na TCDD Transportation. N'oge nzuko ahụ, a na-ekwukwa ụzọ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ okporo ígwè na ụzọ ụgbọ oloko. Ndị isi n'ozuzu ha dị mkpa kwuru na ọ ga-ekwe omume ịmewanyewanye na ọrụ ndị a jụrụ iji mụbaa ụtụ ma kwuo, "Mkpebi ahụ bụ mgbasa ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na ego na nso nso a jụrụ ụlọ ọrụ na òtù ọha na eze zuru oke ka ha mee ihe iji mee ka ego na ego na ego na-eme ihe na nke a. Ngalaba niile, karịsịa ndị nwere ego, malitere ịrụ ọrụ na nke a. Na Ministry of Transport, bir
A ga-akwụ ụgwọ taxi nke ụgbọ mmiri Istanbul! Nke a bụ New Tariff! 28 / 05 / 2019 Akara ụgbọ ala Istanbul a mara ọkwa n'April. Ụnyaahụ, onyeisi ụlọ Chamber of Tradesmen nke Istanbul Taxi, Eyup Aksu Onye isi oche Erdogan kwuru na ha kwurịtara okwu na njedebe nke mbido taxi nke ọnwa 4 TL na 6 TL mileage fee 2.50 TL 3.25 TL kwuru. Nke ahụ bụ mgbe 3. Ụgbọ njem taxi nke ọdụ ụgbọ elu ga-amụba. Tupu mgbe ahụ, nwa amaala chọrọ ịbịa Beylikdüzü 150 TL na-agwụ na njedebe nke ọnwa June, ọnụ ọgụgụ a ga-abụ ihe gbasara 200 lira. Dị ka akụkọ dị na SÖZCÜ; İstanbul Istanbul Taxationen Tradesmen Chamber (ITOO) kwupụtara na April 2019 oge nhazi maka njem mpaghara na Istanbul Airport. ...
Ebe a na-niile oru mpako nke Turkey 02 / 03 / 2015 Ebe a na-niile oru mpako nke Turkey: Channel Istanbul, Marmaray, Istanbul 3. Airport, Yavuz Sultan Selim Bridge, Ọwara 3 Ft Large Istanbul, Turkey ihu na-agbanwe agbanwe na oru ngo a. A na-agbakwụnye ọrụ ọhụrụ na ọrụ ndị ụwa na-atọ ụtọ. 72 isi oru ngo n'okporo ụzọ awara a ga-etinye n'ime ọrụ. Ozi njem, ụgbọ mmiri na nkwurịta okwu ghọtara nnukwu ọrụ dịka Marmaray, Ankara-Istanbul High Speed ​​Train (YHT) nke nwere ihe karịrị 13 ijeri pound na 260 ikpeazụ. ọdụ ụgbọ elu, Yavuz Sultan Selim Bridge (3 Bridge), Istanbul-Izmir ụgbọala, Kars-Baku-Tbilisi ọdụ ụgbọ okporo ígwè, 3 Multi-Storey Istanbul Tunnel Project malitere. Istanbul-Izmir ...
Okporo ụzọ na ụzọ awara awara A na-etinye aka na ntinye aka n'ime usoro ọhụrụ 05 / 02 / 2013 Ndị na-eme ka ndị na-azụ mmadụ n'okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ na-agagharị n'okporo ụzọ na-aga n'okporo ụzọ. Mgbe ọkwa ọkwa banyere nyochaghachi nke akwa na ụzọ awara awara awara, a na-ele anya na mkpebi ikpe nke Privatization High Council (AGB). Nurol Holding, bụ onye sonyere na obi maka privatization nke àkwà mmiri na ụzọ okporo ụzọ na nke ikpeazụ ọnwa, na-ekiri usoro ọhụrụ ahụ nke ọma. Nzukọ Kasị Elu nke Privatization, nke Minista Minista Recep Tayyip Erdogan, na-eduzi, ga-eme mkpebi ikpeazụ na privatization. Deputy Prime Minister Ali Babacan, Minista ego Minista Mehmet Simsek, Minista nke gburugburu ebe obibi na mmepe obodo Erdogan Bayraktar na Ụgbọ njem, Minista na Maritime na Minister Communication Binali Yildirim. Mgbe okwu ndị Minista ahụ gasịrị, ọhụụ ọhụrụ na-aga n'ihu
Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ ahụ emere maka London 01 / 07 / 2014 Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ ahụ emere maka London: Ụlọ ahịa nke Ụlọ ahịa London na-achọ maka ụgbọala ọhụrụ na ọdọ mmiri ígwè nke a na-atụ anya ka a wuo ya n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Osimiri Thames. Ihe ndozi ọhụrụ nke HOK na Arup architects gosipụtara ụzọ pụrụ iche maka igwe ịnyịnya na bọs. Ogwe mmiri ahụ a chọrọ dị elu zuru oke maka njem ụgbọ mmiri, na ọdụ ụgbọ mmiri dị nso dị nso na-emetụta ndị na-emepụta ụlọ, na-achọpụta na njem dị n'etiti ugwu na n'ebe ndịda London ga-eme ka ahụ dị jụụ, ka o kwuru. A na-atụ aro na a ga-ewu ụgbọ mmiri ahụ n'etiti Gallions Reach na Thamesmead n'ofè ọzọ. A na-eme atụmatụ iji ego ruru £ 600 nde. Ọrụ yiri nke ahụ na London ...
Ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko na ụgbọ oloko ga-ebuli?
A ga-akwụ ụgwọ taxi nke ụgbọ mmiri Istanbul! Nke a bụ New Tariff!
Ebe a na-niile oru mpako nke Turkey
Okporo ụzọ na ụzọ awara awara A na-etinye aka na ntinye aka n'ime usoro ọhụrụ
Nke a bụ ọhụụ ọhụrụ ahụ emere maka London
Necmettin University University nke Erbakan na-enye ndị ụmụ akwụkwọ aha YHT aha
Ekekọrịta YHT na mmụba nke ndị njem nleta na-abịa Eskişehir
Ọnụ ọgụgụ nke ndị nleta na Konya mgbe YHT ruru 13 nde